को बन्ला काठमाडौंको मेयर ? यस्ता छन् प्रमुख दलका दावेदारहरु | Radio Makalu 102.1 MHz Websoft University
को बन्ला काठमाडौंको मेयर ? यस्ता छन् प्रमुख दलका दावेदारहरु
मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रेस र एमालेः माओवादी र राप्रपा निर्णायक
काठमाडौं,चैत १४ गते । देशका राजधानी भएका कारण पनि काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्व गर्न प्रमुख दलका केन्द्रीय नेताहरुले नै रुचि देखाउन थालेका छन् ।
काठमाडौंको प्रमुखको हैसियत केन्द्रीय सरकारको मन्त्रीको भन्दा प्रभावशाली हुने भएकाले पनि चर्चित युवा नेताहरुको नाम काठमाडौंको मेयरको उम्मेदवारका रुपमा चर्चा चल्न थालेको छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तहका उम्मेदवार सिफारिसका लागि मापदण्ड तय गर्दैछन् । एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले यसअघि नै निर्णय गरेर सम्बन्धित कमिटीहरुमार्फत उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् ।
कांग्रेसले पनि जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि उम्मेदवार सिफारिसको मापदण्ड तय गर्ने केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले बताए ।
उम्मेदवार मनोनयनको एक महिना बाँकी रहँदा काठमाडौंको मेयरका लागि केन्द्रदेखि जिल्ला तहका नेताहरुले आ-आफ्नो पार्टीभित्र लबिङ तीब्र पारेका छन् । ३२ वडा रहेको महानगरपालिकाका करीव ४ लाख मतदाता रहने अनुमान गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले मतदाता अद्यावधिक गरेपछि मात्र महानगरका कुल मतदाताको टुंगो लाग्नेछ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको चुनाव जित्नुको सन्देश राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा जाने भएकाले ठूला पार्टीले प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदैछन् । पछिल्ला निर्वाचन परिणामहरुलाई हेर्ने हो भने काठमाडौं महानगरपालिकामा कांग्रेस र एमालेबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुनेछ भने माओवादी केन्द्र निर्णायक हुन सक्छ ।
गत संविधानसभा निर्वाचनको परिणाम हेर्दा काठमाडौं महानगरपालिकामा राप्रपाको पनि उल्लेख्य मत आएको छ । त्यस्तै संघीय समाजवादी फोरम पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा छ । तर, फोरम महानगरपालिकाको निर्वाचनमा निर्णायक शक्ति होइन ।
काठमाडौंको मेयरमा राष्ट्रिय स्तरमा ख्यातीप्राप्त नेतालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बहस दलहरुभित्र शुरु भएको छ । त्यसैले कांग्रेसबाट युवा नेता गगन थापालाई सम्भावित मेयरको उम्मेदवारका रुपमा चर्चामा ल्याइएको छ भने एमालेबाट सचिव योगेश भट्टराईको नाम चर्चामा छ ।
यद्यपी दुई नेताको चर्चाको लागिमात्र ल्याइएको हो वा उनीहरुको रुचि र सम्भावित उम्मेदवारका रुपमा अघि सारिएको भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन । कांग्रेसले गगनको नाम चर्चामा ल्याएपछि एमालेबाट योगेश भट्टराईको नाम अघि सारिएको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि दुवै नाम पार्टीका औपचारिक फोरममा छलफलमा आइसकेका छैनन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा २४ वर्षको बीचमा दुईओटा चुनाव भए । पहिलो चुनाव २०४९ मा कांग्रेसका पीएल सिंह मेयर र नविन्द्रराज जोशी उपमेयर निर्वाचित भएका थिए । त्यो चुनावमा एमालेका राजेन्द्र श्रेष्ठ र केशव स्थापित पराजित भएका थिए । २०५४ को चुनावमा एमालेका केशव स्थापित र विदुर मैनाली मेयर तथा उपमेयरमा निर्वाचित भएका थिए ।
यसबीचमा स्थानीय चुनाव नभए पनि काठमाडौंमा २०५६ सालसम्म एमाले सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रुपमा रहेको थियो । तर, २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो, माओवादी दोस्रो र एमाले एक सिट पनि नजिती तेस्रो भएको थियो । २०७० सालमा आइपुग्दा माओवादी एक सिट पनि नजिती चौथो शक्ति बन्न पुग्यो भने कांग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो बने ।
यदि ०७० कै मतलाई आधार मान्ने हो भने काठमाडौं महानगरपालिकामा कांग्रेस सबैभन्दा बलियो छ । तर, संविधानसभा चुनावमा क्षेत्रमा महानगर र तत्कालिन गाविसहरुको मत समावेश थियो ।
अहिले महानगरपालिकाका मतदाताले मात्र मतदान गर्ने भएकाले पछिल्लो संविधानसभा चुनावलाई मात्र आधार बनाउन सकिँदैन भने कतिपय नयाँ मतदाता पनि थपिएका छन् ।
कांग्रेसभित्र काठमाडौं प्रमुखका रुपमा गगन थापा बाहेक नविन्द्रराज जोशीको पनि नाम पार्टीभित्र चर्चामा छ । उनी काठमाडौं ८ बाट सांसद जितिसकेका र महानगरपालिकाको उपमेयर भइसकेका प्रभावशाली नेता हुन् । काठमाडौंमा प्रकाशमान सिंहको प्रभाव रहेकाले उनले गगनलाई रोक्न नविन्द्रराज जोशीको नाम अघि सार्न सक्छन् ।
कांग्रेसका एक नेताका अनुसार प्रकाशमानले नविन्द्रराज जोशीलाई प्रमुख र आफ्नी श्रीमती अञ्जली श्रेष्ठलाई उपप्रमुख बनाउने गरी पार्टीभित्र वातावरण बनाउन लागेका छन् ।
कांग्रेसबाटै मेयरका लागि अर्का सशक्त दावेदारका रुपमा पूर्व सांसद तीर्थराम डंगोलको नाम पनि अघि सारिएको छ ।
डंगोल काठमाडौंका स्थानीय नेवार समुदायका प्रभावशाली नेता भएका कारण उनलाई बलियो उम्मेदवारका रुपमा हेरिएको छ । डंगोलको नाममा पार्टीका दुवै गुटमा धेरै ठूलो विवाद छैन ।
त्यसो त नविन्द्रराज जोशीका दाजु राजुराज जोशी पनि काठमाडौंको मेयरका दावेदारका रुपमा देखिएका छन् ।
एमालेबाट राष्ट्रिय रुपमा स्थापित नेताबाट उम्मेदवार दिनुपर्ने भन्दै सचिव योगेश भट्टराईको नाम कार्यकर्ताले अघि सारेका छन् । त्यस्तै केन्द्रीय कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र राजधानी कमिटीका इञ्चार्ज पोलिटव्यूरो सदस्य सानुकुमार श्रेष्ठ पनि महानगरपालिका प्रमुखको उम्मेदवारका रुपमा चर्चामा छन् । कृष्णगोपाल श्रेष्ठ पूर्व सांसद हुन् भने सानु श्रेष्ठ काठमाडौंका पूर्व जिविस सभापति हुन् ।
तीनैजना नेता बाहेक पार्टीका बिभिन्न कमिटीमा अरु तीन युवा नेताको नाम मेयरका लागि चर्चामा छन् । केन्द्रीय सदस्य जीवनराम श्रेष्ठ, काठमाडौं जिल्ला कमिटीका सचिव विद्यासुन्दर शाक्य र युवा नेता बसन्त मानन्धर एमालेबाट मेयरका सम्भावित प्रत्याशी हुन् । योगेश भट्टराई नउठेको अवस्थामा तीनजना मध्येबाट एकजनाले टिकट पाउने एमाले स्रोतले जनाएको छ ।
जीवनराम श्रेष्ठ काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १५ का पूर्व वडाध्यक्ष हुन् । उनी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका पूर्वसदस्य सचिव तथा हाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष हुन् । युवा परिचालनका हिसाबले श्रेष्ठ बलियो उम्मेदवार हुन् । यसअघिका मेयर केशव स्थापित पनि खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव हुँदै काठमाडौंको मेयर बनेका हुन् ।
एमालेबाट अर्का दावेदार विद्यासुन्दर शाक्य महानगरपालिका २१ नम्बर वडाका दुवै निर्वाचनमा निर्वाचित वडाध्यक्ष हुन् । हाल एमालेबाट महानगरपालिकामा दलीय संयन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्छन् । त्यस्तै बसन्त मानन्धर अनेरास्ववियुका पूर्व महासचिव तथा पार्टीका युवा नेता हुन् । उनले महानगरमा केही समय संयन्त्रमा सहभागी भए बाहेक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अनुभव भने लिएका छैनन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखको उम्मेदवारका रुपमा प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहाल र सर्बोत्तम डंगोलको नाम चर्चामा आएको छ । रेणु ०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ मा कांग्रेसका प्रकाशमान सिंहको निकटतम प्रतिद्वन्द्वी थिइन् । काठमाडौंका १० क्षेत्रमा माओवादी उम्मेदवारमध्ये रेणुमात्र दोेस्रो भएकी थिइन् । प्रचण्ड समेत काठमाडौं १० मा तेस्रो भएका थिए ।
सर्बोत्तम डंगोल महानगरीय संयन्त्रमा रहे पनि एकपटक कारवाहीमा परिसकेका र जनमतको हिसाबले पनि रेणुले बढी मत तान्न सक्ने आँकलन माओवादी वृत्तमा भइरहेको छ । रेणुलाई प्रमुखको उम्मेदवार बनाएर उमेश स्थापितलाई उपप्रमुख बनाउने प्रयास माओवादीभित्र भइरहेको छ । स्थापित एमालेमा हुँदा वडा नम्बर २४ को वडाध्यक्ष थिए ।
राप्रपाबाट काठमाडौंको मेयरमा राजाराम श्रेष्ठको नाम अग्रपंक्तिमा छ । उनी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले गराएको चुनावमा पनि काठमाडौंको मेयर भएका थिए ।-अनलाइनखबरबाट
3/27/2017 03:47:00 PM